मेरी शार्प, कुर्सी - पुरस्कार पुरस्कार
मरियम फ्रान्सेली र जर्मन मा ग्लासगो विश्वविद्यालय मा आर्टिकल डिग्री नैतिक मनोविज्ञान संग मास्टर डिग्री को मास्टर पूरा भयो। उनले कानूनमा स्नातक डिग्री संग यो पछ्याए। स्नातक पछि तिनले वकील र अधिवक्ताको रूपमा अभ्यास गरे। अर्को 13 वर्षको लागि मरियम स्कटल्याण्डमा र ब्रसेल्सको युरोपेली कमेन्टमा काम गर्नुभयो। उनले त्यसपछि क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर कार्य गरे र त्यहाँ धेरै वर्षको लागि एक ट्यूटर बन्नुभयो। 2012 मा मरियम आफ्नो स्कर्ट शिफ्ट को ताजा गर्न को लागि, स्काट्स्की पल्ट को वकील को संकाय मा फर्क्यो। 2014 मा त्यो इनाम इनाम स्थापित गर्न गैर-अभ्यास गरे। तिनी न्यायिक कलेज र संकायका संकाय सदस्य हुन्।
द इनाम फाउन्डेशनमा मेरीले तीन नेतृत्व भूमिका खेल्छिन्। जुन 2014 मा उनी संस्थापक अध्यक्ष थिइन्। मे एक्सएनयूएमएक्समा उनी मुख्य कार्यकारी अधिकारीको प्रोफेशनल भूमिकामा छिर्छिन् जुन उनीले नोभेम्बर 2016 सम्म समितिन् जब उनी बोर्डमा अध्यक्षको रूपमा पुन: सामिल भए।
मेरीले यौन प्रेम र लिङ्ग पावर सम्बन्धको प्रारम्भिक सामान्य युग सम्मर्फत क्लासिक पुरातनताको अवधिमा स्नातकोत्तर काम गर्नका लागि क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा भाग लिनुभयो। यी विवादित मूल्य प्रणालीहरूले अझै पनि संसारलाई असर गर्छ।
जनवरी २०२० देखि मरियम लुसी क्याभेन्डिस कलेजमा भ्रमण गर्ने स्कॉलरको रूपमा फर्किइन्।
उनको अनुसन्धान कार्यको अतिरिक्त, मेरीले विश्वविद्यालयमा कार्यशाला सहयोगीको रूपमा प्रशिक्षण लिई दुई अन्तर्राष्ट्रिय, पुरस्कार-विजेता संगठनहरू प्रयोग गरेको तरीकामा मनोविज्ञान र न्यूरो साइंसबाट अनुसन्धान प्रयोग गर्दै आएका छन्। टेक्नोलोजी मानिसहरुको जीवनमा बढी सम्मिलित हुने बित्तिकै मेरीले क्याम्ब्रिजको स्नातक विकास विभागको युनिभर्सिटीको लागि आफ्नै 2-दिन कार्यशाला डिजाइन गर्छिन्। कार्यशालालाई "सस्टेनिing पीक प्रदर्शन" भनिन्थ्यो। यो व्यावहारिक, प्रमाण-आधारित पाठ्यक्रम हो जुन हामी कसरी सिक्छौं, बानी बदल्न, निर्णय लिने र टेक्नोलोजीको अधिक प्रयोगको बारेमा जोखिमहरूको बारेमा सचेत गराउने। ध्यान तनावमा लचिलोपनाको विकास गर्न, अरुसँग सम्पर्क राख्ने र प्रभावकारी नेता बन्नेमा थियो। उनले उद्यम विद्यार्थीहरूको लागि सल्लाहकारको रूपमा र यसका लागि विज्ञान लेखकको रूपमा पनि काम गरेकी छिन् क्याम्ब्रिज-एमआईटी संस्थान। यो मेसाचुसेट्स टेक्नोलॉजी ऑफ टेक्नोलोजी (एमआईटी) र क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय बीचको संयुक्त उपक्रम हो।
क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा उनको सम्बद्धता दुवैको माध्यमबाट रहन्छ सेन्ट एडमन्डको कलेज र लुसी कैवेंश कलेज जहाँ उनी एक सहयोगी सदस्य हुन्। मेरीले 2015-16 मा क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको सेन्ट एडमन्ड्स कलेजमा भ्रमण गर्ने छात्रको रूपमा एक बर्ष बित्नुभयो। यसले उनलाई व्यवहारिक लतको उदीयमान विज्ञानमा अनुसन्धानको वेग राख्न अनुमति दियो। त्यो समयमा उहाँ दर्जनौं राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा बोल्नुभयो। मेरीले "इन्टरनेट पोर्नोग्राफी लत रोक्न रणनीतिहरू" मा एक लेख प्रकाशित गर्‍यो यहाँ (पृष्ठ 105-116)। उनले पनि सह अध्यायमा सहभागी गरे सेक्स अफिसरहरूसँग काम गर्दै - प्रेमीहरूको लागि एक गाइड Routledge द्वारा प्रकाशित।
मरियम व्यवहार को लत मा काम को रूप मा जारी छ व्यवहारिक लत अध्ययनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समाज। उनले जून6मा योकोहामा, जापानमा उनको 2019th अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन मा एक कागज प्रस्तुत गर्नुभयो। उनी प्रकाशित गर्छिन् अनुसन्धान यस उभरिरहेको क्षेत्रमा सहकर्मीले समीक्षा पत्रिकामा समीक्षा गरे। नवीनतम पेपर पाउन सकिन्छ यहाँ.
यो TED अवधारणा "साझा मूल्यहरूको विचार" मा आधारित छ। यो एक शिक्षा र मनोरञ्जन प्लेटफार्म हो जुन प्रत्यक्ष वार्ता र अनलाइन दुवै उपलब्ध छन्। मैरी 2011 मा एडिनबर्ग मा टीईड ग्लोबल मा गए। त्यसको केही समयपछि उनीहरूलाई सहकार्यलाई सहकार्य गर्न आग्रह गरियो TEDx 2012 मा ग्लासगो कार्यक्रम। उपस्थित भाषण मध्ये एक जना गैरी विल्सन थिए जुन उनीहरु बाट नवीनतम निष्कर्ष साझेदारी गरे वेबसाइट मस्तिष्कमा अनलाईन पोर्नोग्राफीको असरको बारेमा बोलाइयो "ठूलो अश्लील प्रयोग"। त्यस पछि त्यो कुरालाई 12.6 लाख भन्दा बढी पटक हेरिएको छ र 18 भाषाहरूमा अनुवाद गरिएको छ।
गैरी विल्सनले आफ्नो लोकप्रिय कुरालाई उत्कृष्ट किताबमा विस्तार गरे, अब यसको दोस्रो संस्करणमा भनिन्छ तपाईंको ब्रेन पोर्न: इन्टरनेट पोर्नोग्राफी र लतको उभरिरहेको विज्ञान। उनको काम को परिणाम को रूप मा, हजारौं मानिसहरू अश्लील रिकभरि वेबसाइटहरूमा भनेका छन् कि ग्यारीको जानकारीले उनलाई अश्लील छोड्ने प्रयोगको लागि प्रेरित गर्‍यो। अश्लील छोड्दा उनीहरूको यौन स्वास्थ्य र भावनात्मक समस्याहरू कम हुन वा हराउन थाले भनेर रिपोर्ट गरेका छन्। यी चाखलाग्दो र मूल्यवान सामाजिक स्वास्थ्य घटनाहरूको बारेमा सन्देश फैलाउन मद्दत गर्न मरियमले 23rd जुन 2014 मा डा। डेरिल मीडको साथ पुरस्कृत फाउन्डेशनको सह-स्थापना गरे।
अश्लील प्रयोग व्यक्तिगत छनौट हो। हामी यसलाई प्रतिबन्ध गर्न बाहिर छौं तर हामी विश्वास गर्छौं कि यो एक उच्च जोखिम गतिविधि हो। हामी व्यक्तिलाई वर्तमानमा उपलब्ध अनुसन्धानको प्रमाणको आधारमा यसका बारे 'सूचित' छनौट गर्न मद्दत गर्न चाहन्छौं।
पुरस्कार फाउन्डेशन अभियानहरू बच्चाहरूको इन्टरनेट पोर्नोग्राफीमा सहज पहुँच कम गर्न दर्जनौं अनुसन्धान कागजातले संकेत गर्दछ कि यो मस्तिष्कको विकासको कमजोर अवस्थामा बच्चाहरूलाई हानिकारक छ। त्यहाँ एक नाटकीय वृद्धि भएको छ बच्चाहरुमा यौन दुरुपयोग अतीत7वर्षहरूमा, पोलिसी-सम्बन्धी यौन चोटहरूमा हेल्थकेयर प्रोफेसरहरूका अनुसार जसले हाम्रा कार्यशालाहरू र सम्भवतः पनि मृत्यु। हामी यूके सरकारको डिजिटल अर्थव्यवस्था अधिनियम 2017 को पक्षमा छौं उमेर प्रमाणिकरण प्रयोगकर्ताहरूको लागि यो पहिलो र सबैभन्दा पहिला बाल सुरक्षा उपाय हो। यो चाँदीको गोली होइन, तर एक राम्रो सुरूवात स्थान हो। यसले जोखिमको बारेमा शिक्षाको आवश्यकतालाई प्रतिस्थापन गर्नेछैन। र हामी कस्ता लाभहरू गर्छौं भने?
हाम्रो अध्यक्षले फाउन्डेसनको कार्य विकास गर्न 2014 पछि धेरै पुरस्कारहरू प्राप्त गर्यो। यो स्कटिश सरकार द्वारा समर्थित सामाजिक इनोवेशन इनक्यूबेटर पुरस्कार को माध्यम बाट प्रशिक्षण को एक वर्ष को साथ शुरू भयो। यो मा वितरित गरिएको थियो को पग्लनेबिन्दु पट एडिनबर्गमा। यो पछि अनलिट्टबाट दुई स्टार्ट अप पुरस्कारहरू थिए, दुई शैक्षिक ट्रस्टबाट र अर्को ठूलो लोटरी कोषबाट। मेरीले यी पुरस्कारहरूबाट पैसा स्कूलमा डिजिटल डिटोक्सहरू अग्रगामी गर्न प्रयोग गरिन्। उनले विद्यालयहरूमा शिक्षकहरूको लागि अश्‍लील सामग्रीको बारेमा पाठ योजनाहरू पनि विकास गरीन्। एक्सएनयूएमएक्समा उनले रोयल कलेज अफ जनरल प्रक्टिसनर्स द्वारा मान्यता प्राप्त एक दिवसीय कार्यशालाको विकास गर्न मद्दत गर्‍यो। यसले मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यमा इन्टरनेट अश्‍लील सामग्रीको प्रभावको बारेमा पेशेवरहरूलाई प्रशिक्षण दिन्छ।
मरियमको निर्देशकको बोर्डमा सामेल हुनुभयो यौन स्वास्थ्यको उन्नतिको लागि समाज २०१ 2016 मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा र किशोर किशोर-किशोरीहरूले इन्टरनेट पोर्नोग्राफीको समस्याग्रस्त प्रयोगको बारेमा यौन चिकित्सक र यौन शिक्षकहरूका लागि मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण वर्कशपहरू उत्पादन गरेको छ। उनले "हानिकारक यौन व्यवहारको रोकथाम" मा दुर्व्यवहारको उपचारको लागि राष्ट्रिय संगठनको लागि एउटा पेपरमा योगदान पुर्‍याइन् र हानिकारक यौन व्यवहारमा इन्टरनेट अश्‍लील सामग्रीको प्रभावको बारेमा चिकित्सकहरूलाई works कार्यशालाहरू पनि पुर्‍याइन्।
२०१ 2017 मा मरियमलाई स्ट्राथक्लाइड विश्वविद्यालयमा युवा र आपराधिक न्याय केन्द्रमा एक सहयोगी बनाईएको थियो। उनको प्रारम्भिक योगदान ग्लासगो मा March मार्च २०१ on मा CYCJ कार्यक्रममा बोल्दै थियो। खैरो कक्ष र जेलका कक्षहरू: हानिकारक जवान व्यक्तिहरूको न्यूरोडेलम्यानल र संज्ञानात्मक आवश्यकताहरू भेट्नुहोस्। 2018 मा उनीहरूलाई एक को रूपमा नामकरण गरिएको थियो WISE100 सामाजिक उद्यमको महिला महिलाहरु।